बिहान चाडैं उठ्नुको फाइदै फाइदा - नेपालबहस
बिहान चाडैं उठ्नुको फाइदै फाइदा
| १:२५:४५ मा प्रकाशित
१ भदौ, काठमाडौं । ‘अर्ली टू बेड-अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी ऐन्ड वाइज ‘ अङग्रेजीको यो उखान निकै पुरानो हो । जसको मत्लब हो, बिहान चाडैं उठ्नु लाभदायक हुन्छ, यसले मानिसलाई स्वस्थ, धनवान् र ज्ञानी बनाउछ ।
एप्पल कम्पनीको सीईओ टिम कुक सबेरै पौने चार बजे उठ्ने गर्छन् । फिएट कम्पनीको सीईओ सर्जियो मार्शियोन बिहान ३स्३० बजे र प्रख्यात ब्रिटिश व्यापारी रिचर्ड ब्रेनसन बिहान पौने छ बजे उठ्छन् । यी मानिसहरु आ-आफ्ना क्षेत्रमा निकै सफल छन् । के यिनीहरुको सफलताको रहस्य बिहान छिटो उठ्नु हो ? के बिहान उठ्ने सबै मानिस जिन्दगीमा सफल हुन्छन् ?
बिहान चाडैं उठ्नुको धेरै फाईदा हुन्छ, छिटो उठेपछि फ्रेस भएर नाश्ता गरेपछि अफिसको लागि तयार हुन सजिलो हुन्छ र अरु कामको लागि समय पनि बच्छ । त्यसोभए के ढिला उठ्ने व्यक्ति कम सफल हुन्छन् रु अबेर सम्म सुत्ने व्यक्तिको काम सधै अधुंरो हुन्छ त रु के ढिलासम्म सुत्ने मान्छेहरु सफलता हासिल गर्न सक्दैनन् वा स्वस्थ हुदैनन् त ?
विश्वको कुन जनसंख्या मध्य एक चौथाई भाग बिहान उठ्न मन पराउछन् । अनुसन्धानका अनुसार बिहान छिटो उठ्ने व्यक्ति धेरै सहयोगी व्यवहार भएका हुन्छन् । उनीहरु कुनैपनि घटनाको सहि विश्लेषण गर्न सक्छन् । त्यस्तै राति अबेरसम्म नसुत्ने व्यक्तिको कल्पनाशिलता धेरै हुन्छ र धेरै एक्लै समय बिताउन मन पराउँछन् ।
बिहानै उठ्नेहरु आफ्नो स्वस्थको पनि राम्रो ख्याल राख्छन् र राति अबेरसम्म बस्ने मानिसको भन्दा कम मध्यपान गर्छन् । त्यस्ता व्यक्ति डिप्रेसनको कम मात्रामा शिकार हुन्छन् । राती छिटो नसुत्ने मानिसको सम्झन सक्ने शक्ति बलियो हुन्छ र छिटो सुत्ने मानिस भन्दा बुद्दिमान पनि हुन्छन् । कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्ने कुरामा उनीहरु खुला दिमागले काम गर्छन् ।
रति ढिला सुते पनि मानिसहरु छिटो सुत्ने बानि भएका जस्तै स्वस्थ, धनवान र ज्ञानी हुन्छन् । बिहान सबेरै उठ्ने टार्गेट बनाउनुमा कुनै फाइदा नहुने कुरा अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । यदि कसैलाई अली धेरै सुत्न मन पर्छ भने सुत्दा केहि असर नपर्ने वैज्ञानिकहरु बताउँछन् ।
यदी मानिसको बडी क्लकको विरुद्धमा जवर्जस्ती बिहान उठ्ने या राति ढिलासम्म उठ्ने काम गर्यो भने त्यसले शरिरलाई हानि पुर्याउछ । उनी भन्छिन्, ‘शरीरलाई कुनैपनि कार्यमा जबर्जस्ति गर्दा उल्टै हानि हुन्छ । शरीरलाई सिर्कडियन क्लक मतलब शरीरको जैविक घडीको हिसाबले चल्न दिनु पर्छ अनि मात्र शरीरको परफर्मेन्स राम्रो हुन्छ ।’
तर विश्वमा राति ढिला सुत्ने र बिहान पख अबेर उठ्नेलाई अल्छि, कमजोर र बिग्रिएको भनिन्छ त्यसैले धेरै जसो मानिसहरु बिहान छिटो उठ्ने कोसिस गर्छन् । बिहान सबेरै उठ्नुको धेरै फाइदा छन्, शरीरलाई प्राकृतिक प्रकाश प्राप्त हुन्छ जसले शरीरलाई भिटामिन-डी को आपूर्ति पूर्ण गर्छ र धेरै काम छिटो सकिन्छ । तर यदी तपाइलाई बिहान सुत्न मज्जा लाग्छ भने सिरक तान्नुहोस् र आरामले सुत्नुहोस् । बीबीसी
गोरखामा करेन्ट लागेर एक युवकको मृत्यु ९ घण्टा पहिले
धरहरा मात्रै होइन नेपालीको स्वाभिमान ठडियो :मुख्यमन्त्री पौडेल ९ घण्टा पहिले
कारखाना आगलागीमा परी ८ जनाको मृत्यु ८ घण्टा पहिले
नेपाल समूहभित्रै विवादः नयाँ दल गठन गर्ने कि नगर्ने ? १४ घण्टा पहिले
फेवातालमा माछापुच्छ्रेको छायाँ १३ घण्टा पहिले
मनाङमा च्याङ्ग्रा खान गएको हिउँ चितुवा खोरमै थुनियो २ दिन पहिले
प्रभु बैंकको नयाँ शाखा नुवाकोटको महादेवफाँटमा २ दिन पहिले
आईपीएलमा चेन्नईकाे पहिलो जित दर्ता ७ दिन पहिले
अमेरिकाबाट बिन्तीले ल्याए ‘यी आँखाका नानीमा’ २ हप्ता पहिले
गण्डकीमा १७ जना कोरोना संक्रमित थपिए ७ महिना पहिले
आज नियुक्त भएका मन्त्रीको शपथ भोलि बिहान साढे ११ बजे ६ महिना पहिले
काेराेनाबाट बाँकेमा थप ३ जनाको मृत्यु ४ महिना पहिले
नेता तान्ने होडबाजीमा ओली र प्रचण्ड २ हप्ता पहिले